Ukuhamba ngaphandle kweVisa ukusuka ePalestine ukuya eSt Kitts naseNevis ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Saint Kitts kunye neNevis Iindaba eziziiNgcaciso » Ukuhamba ngaphandle kweVisa ukusuka ePalestine ukuya eSt Kitts naseNevis ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • IPalestine Breaking News • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • I-Saint Kitts kunye neNevis Iindaba eziziiNgcaciso • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukuhamba ngaphandle kweVisa ukusuka ePalestine ukuya eSt Kitts naseNevis ngoku.
IPalestine lilizwe lesine ukwenza ubudlelane bozakuzo kunye neSt Kitts kunye neNevis emva kweBurkina Faso, iGabon kunye ne-Egypt kwiiveki ezine ezidlulileyo.
I-St Kitts kunye ne-Nevis yoKhenketho berekhoda isivumelwano sesine sezopolitiko kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezine.
Ukurhoxiswa kweVisa-simahla kuvumela uhambo olungena sithintelo kubemi beentlanga ezisayina isivumelwano.
Eli lungelo lidlulela nakubantu abafumene ubumi ngeendlela zoqoqosho.
INkulumbuso yeNevis kunye noMphathiswa Wezangaphandle waseSt Kitts naseNevis, Hon. UMark Brantley ebesakha ngenkuthalo ubudlelwane bamanye amazwe kwinyanga ephelileyo.
Ngexesha lokukhumbula isikhumbuzo seminyaka engama-60 yoMbutho ongahambelaniyo kunye neSerbia kule veki, uMphathiswa uBrantley utyikitye isivumelwano sokungahlawulisi visa kunye nePalestine.
Palestina lilizwe lesine ukwenza ubudlelane bozakuzo ngokusemthethweni St Kitts neNevis emva kweBurkina Faso, iGabon ne-Egypt kwezi veki zine zidlulileyo.
“Lusuku lwembali eSt Kitts naseNevis njengoko sasityikitya [isivumelwano] sokurhoxisa isivumelwano sokundwendwela kunye no-HE Riad Maliki Umphathiswa Wezangaphandle [weSizwe] wase-Palestine esivumela ukuhamba ngaphandle kwevisa ngaphandle kwabantu bethu. I-St Kitts kunye ne-Nevis iyaqhubeka nokwandisa unyawo loonozakuzaku kwilizwe liphela, utshilo umphathiswa u-Brantley kwi-Instagram.
Ukurhoxiswa kweVisa-simahla kuvumela uhambo olungena sithintelo kubemi beentlanga ezisayina isivumelwano. Oku kuthetha ukuba i-visa yokungena ayifuneki kubemi beliphi ilizwe ngaphambi kokungena kweli lizwe isivumelwano sisayinwe. Eli lungelo likwanabela nakubantu abafumene ubumi ngeendlela zoqoqosho, njenge St Kitts neNevisUbumi ngeNkqubo yoTyalo-mali (i-CBI).
The State of Palestine, ulongezo olutsha ku-St Kitts kunye no-Nevis 'uluhlu olukhulayo lweminikelo yokuhamba ngaphandle kwe-visa, ivumela abemi bayo ukuba bangene kufutshane neendawo ezingama-35. Nangona kunjalo, ngezigidi zabantu basePalestine ezihlala ngaphakathi ngenxa yokungazinzi kwezopolitiko, uninzi lwabo lujamelene nobunzima bokuhamba kumazwe aphesheya okanye nokubuyela kwilizwe labo.
Ngalesi sivumelwano “siyimbali”, abahlali basePalestine kunye noosomashishini abakhethe ukuthatha inxaxheba kwiNkqubo ye-CBI yaseSt Kitts kunye neNevis ngokubanzi banokuhamba ngaphandle kwevisa ngaphandle kwePalestine kuphela kodwa phantse kumazwe ali-160 kunye nemimandla, kubandakanya imfundo esembindini kunye neendawo zeshishini.